कनकर्नो | काशीनाथ मिश्रित
हास्यव्यङ्ग्य काशीनाथ मिश्रित December 15, 2020, 12:57 pm
ए हजुर ! त्यसरी हावा खुस्केला जस्तो गरी न दौड्नुस् न भन्या ! के छोप्न हतार हो? सुन्नुभएन र? होइन तपाईँको कान त त्यहीँ छ ! छाम्नुस् न ! होइन मेरो कुरा सुन्नु नै भएन क्यारे । त्यो उडेको कागले तपाईँको कान लगेकै छैन । कसले भन्यो र कागले कान लग्यो भनेर? पहिले नै आफ्नो कान छाम्नुपर्छ नि । त्यसै भन्या हुन् र बुढाहरूले कान छाम्नु छैन कागको पछि दगुर्ने भनेर ! हैन, उहाँले पहिले त राम्ररी सुन्नुहुन्थ्यो ;आजकल सुन्न छोड्नुभएछ ।
सुन्न छोड्दैमा कान कागले लगिहाल्दैन । कानमा कानेगुजी भरिएर पनि नसुनिएको हुन सक्छ । त्यसो हो भने तपाईँलाई कनकर्नो चाहिएको हो एउटा बुझ्नु भो? हैन् यति चिच्याएर भन्दा पनि सुन्नुभएन । लाउड स्पिकरबाट भनेको पनि सुन्नुहुन्न कि ! यो त अचम्मै भयो । ए ! लौ न जाओ कोही उहाँलाई एउटा कनकर्नो दिएर आओ; कानेगुजी झिक्न भनेर । त्यसरी बाटो पनि नहेरी उडेको कागलाई छोप्न दौड्दा कतै भड्खालोमा छासिनुहुन्छ कि भन्ने डर पो लाग्न थाल्यो मलाई । लौ न पछिपछि दौडेर उहाँलाई उछिन कसैले । दुर्घटना नहुँदै जोगाउनु पर्दैन र? पटक्कै सुन्न छोड्नुभएछ आजकल । यति एउटा कनकर्नो दिएर कान कोट्याउन भनिदेओ । कानेगुजी निखार्न भनिदेओ । अनि राम्ररी सुन्नुहुनेछ र त्यो कागको पछि डौड्नुहुने छैन । आफ्नो कान भईकन पनि किन त्यसरी दौडेको होला?
ए ! म नै झुक्किएँ क्यारे ! उहाँ कागको पछिपछि दौडेको होइन , काग पो उहाँको अघिअघि उडेको रहेछ । काग धेरै बाठो छ । डाँडो काटिसक्यो । उहाँ भने अझै हस्याङफस्याङ गर्दै हुनुहुन्छ । न कसैको कुरा सुन्नुहुन्छ न कान कोट्याउन मान्नुहुन्छ । यो कनकर्नो खराब छैन भन्दा पनि पत्याउनुहुन्न । कसैले पनि सुन्न छोडेको हो कि उहाँले मात्र हो म आफै अन्योलमा परेँ बा !! कानेगुजी झिक्न कनकर्नो प्रयोग नगरे के गर्ने त? डाक्टरहरूले भनेका छन् रे हुन्न भनेर? थाहा छ डाक्टरहरू पनि बाठा भएका छन् । आफ्नो ओखति बिक्दैन भनेर कनकर्नो प्रयोग गर्नु हुन्न भनेर प्रचारबाजी गरेका हुन् । कनकर्नोले कान कोट्यायो भने कान खराब हुन्छ रे । भुत्रो भयो खराब ! आफ्नो पेशा नचल्ला भन्ने कत्रो डर हँ तिनीहरूलाई । हामीले सानामा त्यही कनकर्नोले कानेगुजी निकालेर आजसम्म आएकै छौँ खै कान खराब भएको छैन । अरुलाई त्यसै तर्साउन पाइन्छ? कोरोना ! कोरोना !! भनेर सातो खाए जस्तो हो र कन्कर्नो ! कन्कर्नो भनेर तर्साउन ।
कनकर्नोले कानेगुजी नझिक्ने हो भने पातीको ठेट्नाले झिके भैहाल्यो नि । आखिर कानेगुजी नझिक्ने हो भने सुन्ने कसरी? सियोले पो कानमा घोच्ला भन्ने डर, कनकर्नोको त टुप्पो तिखो पनि हुँदैन । डाडु जस्तो खोपिल्टो हुन्छ; घोच्ने भन्ने सम्भावना नै रहँदैन ।डाक्टरहरूलाई साँच्चिकै हानिकारक छ भन्ने लाग्छ भने ‘कनकर्नोले कान कोट्याउनु हानिकारक छ ।‘ भन्ने कोटेसन राखिदिए भैहाल्यो नि प्रत्येक कनकर्नोमा । ‘धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भन्ने लेखेपछि दनादन चुरोट बेच्न पाइन्छ । ‘सुर्तिजन्य पदार्थले स्वास्थ्यलाई खराब गर्दछ’ भन्ने लेखेर क्यान्सर लागेको चित्र टाँगेपछि सुर्ती, खैनी, भोला जस्ता खाद्य पदार्थ बेच्न खुलेआम पाइन्छ । ‘मद्यपान मानव स्वास्थ्यका लागि हानीकारक छ’ भन्ने लेखिदिएपछि जस्तोसुकै नेपाली खोयाबिर्के पेय पदार्थ पनि बेच्न छुट छ भने कनकर्नोलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने किन? मैले आजकल नङचिम्टामा कनकर्नो देख्न छोडेको कारण खोतल्दै जाँदा यो रहस्य फेला पारेको हुँ । अबदेखि कनकर्नोमा पनि ‘यो कानका लागि हानिकारक छ’ भन्ने लेखिनु पर्यो तर बेच्नै नदिने षड्यन्त्र गर्न भएन । यसो हो भने त उहाँले मात्र हैन हामीले पनि अबको दुई तिन वर्षमा कानले सुन्न छोडिएला जस्तो छ ।
उहाँले मैले भनेको मात्र नसुनेको हो कि अरु कुनै पनि नसुन्नुभएको हो थाहा भएन । के गर्ने हाम्रो आवाज कागको जस्तो चर्को छैन । कुना काप्चामा बसेर धुरुधुरु रुँदा सारङ्गी बजे जस्तो लाग्दो हो । त्यति मसिनो आवाज सुनिने कुरै भएन । रेडियो र टेलिभिजनका समाचार त सुन्नुहुन्छ होला । ती पनि सुन्नुहुन्न भने त पक्कै एउटा कनकर्नो साथै राखेर हिँड्ने गर्नोस् है हजुर । त्यस्तो ठुलो मान्छे भएपछि सबैका कुरा सुन्नुपर्छ ।पहिले पहिले महाराजले जनताका कुरा सुन्दै हिँड्दा ‘मैले बुझेँ !’ भन्ने हुकुम बक्सन्थ्यो । अहिले तपाईँको पालो छ ; कम से कम ‘मैले सुनेँ ! ‘ भनेर उद्घोष गरेको थाहा पाउन पाए पनि कस्तो हुँदो हो ! त्यसरी अरुको लहैलहैमा लागेर नहिँड्नुहोस् क्या हजुर !
यहाँ गाउँघरमा त निरक्षर बाजे बज्यैले पनि हाम्रा कुरा माथिकाले सुन्दैनन् भन्छन् नि ! सुन्नै नहुने अश्लील कुरा किन बोल्दाहुन् तिनीहरू? लाजै नभाका । चाहिने कुरा बोले पो हुन्छ । सधै अधिकार चाहियो मात्र भनेर हुन्छ र! कर्तव्य पनि सम्झनुपर्छ । उपभोक्ता अधिकार रे ! चुरोट, खैनी रक्सी जस्ता पदार्थ खान हुने अनि विषादी मिसाएको तरकारी खान नहुने ! डेट ओभर भएका औषधी खान नहुने । बलात्कारमा परेका बालिकाहरू त भलै एकान्तमा भएकाले चित्कार नसुनिएको होला ल । तर यो जघन्य अपराध हो । बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ । त्यस्तो कानुन बनाइनुपर्छ भनेर संसदमै कराउने महिला सांसदहरूको आवाज पनि नसुनिएको जस्तो लाग्यो । हुन त कोइलीले गीत गाए जस्तो सुनियो होला वसन्त ऋतुमा । कानैनेर का का गर्दै काग कराएको भए पो सुन्नु ।
भूकम्प पिडितका आवाज सुनिएन रे ! पहिरो पिडितका आवाज सुनिएन रे ! द्वन्द्वपिडितका आवाज त झनै सुनिएन रे ! हैन सबै झ्याउँकिरी झैँ झ्याउँझ्याउँ गरेपछि कसका कुरा सुन्ने हो?वैदेशिक रोजगार पिडितका कुरा सुन्ने कि स्वदेशी बेरोजगार पिडितका सुन्ने । हैरानै हुँदो हो । कोरोना त्रास आएदेखि त झन् बाढीपिडितका र खाडी पिडितका मात्र हैन गाडीपिडित र झाडी पिडितका समेत कुरा सुन्नुपर्ने भो । त्यसैले त कनकर्नोले कोतरे पनि सुन्न नसक्नुभएको होला नि ! यी गाउँलेहरूले पनि अलिकति बुझ्नुपर्ने हो ।अझ यो देशको राजदुतले यो भन्छ; त्यो देशको राजदुतले ऊ भन्छ । यो मर्का तिनीहरूलाई के थाहा? खालि मेरो कुरा सुनिएन मात्र भन्छन् भातमाराहरू ।
गाउँलेहरूको मात्र के कुरा गर्नु ! सहरियाहरूले पनि सुन्न छोडे जस्तो छ । नत्र त सरकालरले रेडियो टेलिभिजनबाट फुकेको फुक्यै छ मास्क नलगाई बाहिर ननिस्कनुस् भनेर । कसैले सुन्ने भए पो ! कालले झै कोरोनाले कपाकप मान्छेहरूलाई जिउँदै खाइरहँदा पनि भनेको सुन्दै नसुन्नेहरूलाई पनि अब एकएकवटा कनकर्नो वितरण गरिदिए हुन्छ । उहाँलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ र? यहाँहरू पनि उस्तै हो । तपाईँहरू पनि कान छउन्जेल कागको पछिपछि दौडनुस् अनि कागले कान लगेपछि बस्नुहोला चुप लागेर । बरु उहाँहरू आएको बेला ‘हाम्रो कुरा सुन्नै छोड्नुभयो’ भनेर कनकर्नो उपहार दिने तयारी गर्नुहोस् ।
त्यहाँ कुर्सीमा बस्दा नसुने पनि यहाँ तपाईँ हामीहरू भएका ठाउँमा आउँदा त सुन्ने बनेर आउनु पर्यो नि । उहाँ जस्ता ठुला मान्छेलाई मामुली कनकर्नो दिएर हुँदैन भन्ने लाग्छ भने सुन चाँदीकै बनाउनु पर्ला । तर कनकर्नो भने दिनैपर्छ कि ! उतिखेर भाषण सुन्दा सुन्दा तपाईँकै कान पनि कनकर्नो चाहिने भएका छन् भने पहिले नै कानेगुजी झिक्नुस् । नडराउनुहोला कनकर्नोले कान कोट्याउँदा कानलाई कुनै हानि गर्दैन । सियोले कोट्याउन त भनेको हैन नि ! फेरि नसुनेर सियोले कोट्याउनुहोला र बरबाद होला । डाक्टरहरूलाई सोध्न नजानुहोस् है ! अहिले कोरोनाको उपचार छोडेर कानको उपचार हुँदैन । मेरो कुरा सुन्नुभयो? लौ एक पटक आफ्नो कान छाम्नुहोस् त !!